Olona 41 no maty, am-polony no tsy hita tany India, ny fihotsahan'ny tany sy ny tondra-drano
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Olona 41 no maty, am-polony no tsy hita tany India, ny fihotsahan'ny tany sy ny tondra-drano
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Olona 41 no maty, am-polony no tsy hita tany India, ny fihotsahan'ny tany sy ny tondra-drano.
Mpizahatany maherin'ny 100 no tafahitsoka tao anaty toeram-pialantsasatra iray tao Ramgarh taorian'ny safo-drano nanaparitaka faritra maro.
Olona 35 no maty nandritra ny fihotsahan'ny tany tamin'ny talata lasa teo tao amin'ny fanjakana Himalaya, Uttarakhand.
Farafahakeliny olona 30 no maty tamin'ny tranga roa samihafa tao amin'ny faritra Nainital niharan-doza indrindra tamin'ny talata teo.
Nilaza ny tompon'andraikitra fa roa na telo andro farafahakeliny ny asa famonjena ary am-polony maro ny olona tsy hita popoka.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta Indiana dia farafahakeliny olona 41 no maty ary am-polony no tsy hita tamin'ny fihotsahan'ny tany sy tondra-drano tany avaratr'i India, vokatry ny oram-be.
Olona 35 no voalaza fa maty vokatry ny fihotsahan'ny tany tamin'ny talata lasa teo taorian'ny nahafatesana olona enina tamina tranga tahaka izany, iray andro talohan'io, tao amin'ny fanjakan'ny Himalaya, Uttarakhand.
Olona 30 farafahakeliny no maty ary olona marobe no mbola tsy hita popoka tamina trangan-javatra fito samy hafa tao amin'ny faritra Nainital niharan-doza indrindra tamin'ny talata talata lasa teo, taorian'ny fipoahan'ny rahona - safo-drano mahery vaika - izay niteraka fihotsahan'ny tany ary nandrava rafitra maro.
Faritra lavitra maro any amin'ny faritra be havoana no nanatri-maso fahasimbana be tamin'ny oram-be.
Ny tafika, ny hery nasionaly ho an'ny valisoa ho an'ny loza voajanahary ary ny herin'ny fanjakana hamaly ny voina dia samy mandray anjara amin'ny ezaka famonjena ankehitriny ao Uttarakhand.
Ny fihotsahan'ny tany iray tany amin'ny faritra avaratr'i Almora dia nahafaty olona dimy taorian'ny nandravan'ireo vatobe sy rindrina feno fotaka ny tranony.
Olona enina farafahakeliny no maty tamin'ny alatsinainy tany amin'ny distrika lavitra roa amin'ny fanjakana.
The Departemantan'ny toetr'andro Indiana nanitatra sy nanitatra ny fampandrenesana ny toetrandro ny talata teo, naminavina ny rotsak'orana "mavesatra" ka "be dia be" any amin'ny faritra ao anatin'ny roa andro manaraka.
Nilaza ny biraon'ny toetrandro fa faritra maro no tototry ny rotsakorana mihoatra ny 400mm (16 santimetatra) omaly, ka nahatonga ny fihotsahan'ny tany sy ny tondra-drano.
Nanafatra ny fanakatonana sekoly ny manampahefana ary nandrara ny hetsika ara-pinoana sy fizahan-tany rehetra ao amin'ny fanjakana.
Mpizahatany maherin'ny 100 no tafahitsoka tao anaty trano fialantsasatra tao Ramgarh, India taorian'ny safo-drano Kosi nanondraka faritra maro.
Nampitandrina mialoha ny oram-be ny orana amin'ny andro ho avy ao amin'ny fanjakan'ny Kerala atsimo izay efa namono olona 27 farafahakeliny hatramin'ny zoma.
Tohodrano maro ao amin'ny fanjakana no manakaiky ny toerana mampidi-doza ary namindra toerana an'arivony ny manampahefana ho any amin'ny toerana azo antoka kokoa satria tondra-drano lehibe.
IndiaNy biraon'ny toetr'andro dia nilaza fa hisy oram-be indray handratra ny fanjakana ao anatin'ny roa andro aorian'ny famerenana fohy anio.